Etu otu oru ahia kwesiri isi soro ndi mmadu no na Social Media Platform | Martech Zone
Echiche m banyere mgbasa ozi ọha na eze na-adịkarị iche na ndị nọ na ụlọ ọrụ m. Na usoro iwu, enwere m mmasị na mgbasa ozi mmekọrịta yana ohere ọ na-enye ndị azụmaahịa iru ndị ahịa na atụmanya na ọkwa onwe. Eziokwu ahụ dị nnọọ iche, n'agbanyeghị.
M na-ele ulo oru inwale ahu nagide na-elekọta mmadụ media otu ụzọ ha si eme ndị ọzọ ahịa ọwa. N'ọnọdụ ụfọdụ, nke a emeela ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe nrịba ama nke na-eme ka ọha na eze mara onye ọrụ mgbasa ozi na-emebi akara, ha anaghị enyere ya aka. Oge ndị ọzọ, ọ bụ na ụdị ahụ anaghị ahụ ohere iji dozie esemokwu na nnọkọ ọha na eze, na-enye mmụba nke ezi ihe ha nwere ike ime.
N’ahịa zuru ụwa ọnụ nke taa, ụwa ebe azụmahịa si ụwa niile dị na swipe nke mkpịsị aka na smartphone, ọnụnọ gị n'ịntanetị adịbeghị mkpa. Ikwesiri iguzosi ike na ndị asọmpi gị, dịrị maka ajụjụ na ajụjụ ma soro ndị ahịa gị nwee njikọ ka ha wee jiri ọrụ gị ugboro ugboro. Ọ bụrụ na ị na-eme ya n'ụzọ ziri ezi, ebe kachasị mma ị ga-eme bụ na mgbasa ozi.
TollFreeForwarding.com akpọwo nke ọma aha ọhụrụ ha ọhụrụ, Etikpụrụ Azụmaahịa Mgbasa Ọha. Enwere m mmasị n'iji okwu a eme ihe ezi kama atụmatụ, atụmatụ, ma ọ bụ nduzi. Nkọwa nke ụkpụrụ bụ koodu omenala nke omume oma n'ime obodo ma obu n'etiti ndi otu oru ma obu otu ndi. Ọganihu! Enwere olile anya otu azụmaahịa si enyocha, zaghachi, ma kwalite onwe ha na mgbasa ozi mmekọrịta - na ozi nkọwa a na-arụ nnukwu ọrụ n'ịkọwapụta ya.
Facebook - zaghachi ngwa ngwa na nke ọma na arịrịọ ọ bụla site na Facebook Page. Zere iji hashtags, anaghị eji ha eme ihe n'elu ikpo okwu.
Instagram - jiri akuko iji nye ahaziri iche, n’azụ ihe ilere anya na azụmaahịa gị. Na-agbanwe agbanwe na akara ngosi gị, ihe nzacha ahụ tinye, ma jiri hashtags rụọ ọrụ nke ọma.
Twitter - jiri usoro mgbasa ozi mgbasa ozi dị ka ndị na-akwado anyị, Agorapulse, ka ịtọọ oge, kwụ n'ahịrị, ma bulie ịhapụ Tweets gị. Zere autoresponders ma na-emeghachi omume na isiokwu na-ewu ewu na hashtags.
Youtube - mepụta thumbnails omenala, tinye kaadị aha, ma gbaa ndenye aha na ọwa gị site na ntanetị na vidiyo na-ejikọ.
Pinterest - kpoo ọdịnaya site na ndị ọrụ ndị ọzọ na ndị na-eme ihe ike iji soro obodo gị. Gbaa mbọ hụ na onyonyo saịtị gị niile dị mfe - tinye Pinterest Pin Ọ bọtịnụ.
LinkedIn - etinyela aha na ntinye aka na email gi. Kekọrịta ọdịnaya ụlọ ọrụ dị mkpa iji wuo ntụkwasị obi na mmetụta gị n'elu ikpo okwu.
Nke a bụ nnukwu infographic, Mediakpụrụ Azụmaahịa Mgbasa Ọha: Nke nyiwe dị.
Tags: mbọnụkpụrụ azụmahịaeziFacebooknzachahavehtagsinstagramLinkedIntuo yaPinterestụkpụrụ mgbasa ozitrending isiokwuTwitteryoutube